Maxaa u qabsoomay Taliyaha Ciidanka Booliska JSL, Mudadii Koobnayd ee uu joogay. Qaybtii 1aad – WARSOOR
Ciidanka Booliska JSL, oo mudadii koobnayd ee uu joogay Taliyaha cusub ee haatan hogaamiya Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi (Dabagale) ayaa waxa ay muujiyeen, dadaal iyo dardar shaqo oo mugle, taasi oo ay bulshadu aad ugu diirsatay, isla markaasina ay qirtay, dadaalkooda shaqo iyo sida ay heeganka ugu yihiin inay gutaan waajibkooda qaran.
Hadaba, qormadan kooban, waxa aan dhawr qodob kaga xusidi-doonaa, waxyaabaha u qabsoomay intii uu xilka hayay, Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi (Dabagale). Taliyaha oo ku suntan masuul kulan-saday hawl-karnimo,hogaamin hufan iyo dadaal dheeraada, ayaa waxa kamida waxqabadka baaxada leh ee mudada kooban ee uu joogay u hirgalay, in uu dagaal baaxad leh la galay tuugta, mukhaadaraadka sida khamriga iyo xashiishadda oo bilowgii hore ee uu xafiiska yimi-ba xadi aan la qiyaasi karin hoos ugu dhacay, taasi oo markii arrimahaasi yaraadeena, ay sidoo kale yaraadeen, ciyaalkii dhaca geysan jiray. Arrinkaas oo xukuumad iyo shacaba taliyaha aad loogu hambalyeeyey. Isla-markaasina bulshada tustay in marka maandooriyuhu yaraado ay yaraanayaan dhaca, boobka iyo kooxaysigu.
Sidoo kale intii uu joogay Taliye Jano-gale waxa aad kor loogu qaaday dhinaca nadaafadda Saldhigyada guud ahaan dalka, taasi oo uu taliyuhu, sameeyey ciidan u gaara oo ka shaqeeya buufinta waxyabaha keena nadaafad-xumada saldhigyada, oo uu taliyuhu xusay in ay sababto, maxaabiista faraha badan iyo saldhigyada dalka oo aan u dhisnayn qaab saldhig, marka laga reebo saldhigyada Dhexe iyo Saldhiga Macallin Haaruun ee Hargeysa. Taliyaha ayaa waxa uu ballanqaaday in qolalka maxaabiista ee saldhigyada loo samayn doono daaqado ay hawada ka qaataan maxaabiistu, isagoo sidoo kalena sameeyey koox gaara oo saraakiila oo kormeer joogta ah ku sameeya nadaafada iyo xaalada maxaabiista ku jirta saldhigyada, isagoo sidoo kalena saldhigyada caasimada Hargeysa, uu taliyuhu isagu ku sameeyo kormeer joogta ah oo uu ugu kuur-galaayo xaalada guud ee maxaabiista iyo nadaafada saldhigyada caasimada Hargeysa, todobaadkiiba hal mar.
Taliye Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sidoo kale waxa u suurta-gashay inuu mudadii koobnayd ee uu joogay uu si-weyn iskugu soo dhaweeyo saaxiibtinimada iyo wada-shaqaynta bulshada iyo ciidanka booliska, taasi oo wacyigalin iyo taalaabooyin muuqda uu ka sameeyey wanaajinta xidhiidhka shacabka iyo ciidanka.
Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi (Dabagale) ayaa sidoo kale waxa uu warbaahinta ka sheegay oo uu ugu bushaareeyey bulshada in xukuumadu dhakhso ah u kordhinayso jeelasha si loo helo rug lagu xidho dadka xukuman ee saldhigyada ku jira, taasi oo uu xusay in sannadka dambe-na xabsi weyn laga dhisayo Bariga Hargeysa haddii Alle idmo.
25 Jan 2020, Taliyaha oo ka hadlaayey kulan ay yeesheen xubno kamida masuuliyiinta sare ee xukuumada iyo Saxaafadda madaxa-banaan ee dalku, ayaa waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay inay saxaafadu tahay bilar weyn oo qaranka meel aad ugu muhiima ugu jirta, isla markaasin loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan ilaalinta sharciga iyo nidaamka saxan ee war-tabinta, isagoo isla markaasina tusaale usoo qaatay sadex war oo si qaldan ay warbaahinta dalku u baahisay 20-kii cisho ee ugu horeeyey ee uu xilka taliyaha hayey, taasi oo uu warbaahinta dalka ka waaniyey inay ka waan-toobaan qaladaadkaasi soo noqnoqda ee ay ku kacayaan warbaahintu.
Taliyaha Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi (Dabagale) ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaanay boolis ahaan jeclayn xadhigga saxaafadda, xidhiidh fiicanna ay leeyihiin ururka SOLJA. Balse ay mararka qaarkood xarumo kale oo dawli ahi dalbadaan in loo xidho suxufiyiin. Kuwii uga dambeeyeyna uu xorriyadda u celiyay, isagoo isla markaasina saxaafada dalka usoo-jeediyey inay si wada jira uga wada shaqeeyaan horumarin qaranka.
Dhinaca kale, Taliye Maxamed Aadan Saqadhi , ayaa waxa uu marar dhawra cod dheer bulshada ugu sheegay in uu meel adag ka taagan yahay in lagu gefo shacabka, taasi oo intuu xilka hayay bulshadu uga marag furtay dhawr kiis oo lagu xidhay askar ka tirsan ciidanka booliska JSL, oo qaarkoodna shaqada lagaga ruqseeyey, kuwaas oo ku kacay falal tacadiya oo ay ku sameeyeen dad rayid ah, sida dhacdadii shaqaaqada degmada wajaale ee ahayd ruux dumara oo qaar kamida ciidanka boolisku sida qaldan u fara-saareen iyo sidoo kale mid kamida askarta booliska oo isna caasimada hargeysa ugu gacan qaaday haweenay, dhamaan askartan ka tirsan ciidanka ayaa taliyuhu si degdega uga qaaday talaabadii anshax ee ku haboonayd taasi oo bulshaduna aad ugu diirsatay.
Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi (Dabagale) ayaa sidoo kale mudadii koobnayd ee uu joogay waxa u hir-gashay inuu kor u qaado dhinaca tababarada ciidanka iyo sidoo kale mooralka iyo hiigsiga ciidanka, taasi oo uu sidoo kale ciidanka u sameeyey balanqaadyo dhiirigalinta oo uu ku abaal-marin doono askariga la yimaada dadaalka iyo waxqabadka lagu helaayo. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu ciidanka ku dhiirigaliyey barashada iyo ku dhaqanka diinta iyo cibaadada suuban oo ay ugu horayso tukashada salaada iyo barashada quraanka oo uu xusay in uu saldhig kasta oo dalka ku yaala u samaynaayo macalin bara quraanka iyo axkaamta diiniga ah-ba.
Taliyaha ayaa sidoo kale waxa mudadii uu joogay uu talaabo muhiima oo horumarina ka sameeyey, dhinaca dhismaha iyo horumarinta hawlaha ciidanka, taasi oo aynu tusaale usoo qaadan karno horumarinta waaxda dhismaha ee ciidanka oo taliyuhu markii ugu horeysay taariikhda ciidanka booliska uu sameeyey waax ugaara dhismaha oo ka kooban dhamaan qaybaha kala duwan ee xirfadaha dhismaha, oo shaqaynaysa, dhisida iyo fulinta dhismayaasha loo dhisaayo ciidanka booliska oo aan hore u jirin, isla markaasina ay hada fuliyeen saldhigii ugu horeeyey oo laga hirgaliyey xarunta degmada Fara-weyne ee gobolka Maroodi-jeex oo 04 March 2020 xadhiga laga jaray isla markaasina ay hada qorshaynayaan sadex saldhig oo kale oo laga hirgalinaayo deeganada ku teedsan xuduudka Itoobiya iyo Somaliland.
Sidoo kale, Ciidanka Booliska JSL, oo halbawle u noqday, xakamaynta iyo ka hortaga faafitaanka cudurkan Covid19 ee dunida saamaynta baaxada leh ku keenay, ayaa waxa ay sameeyeen dadaal mug iyo miisaan culus kaasi oo ay mucjiso kale oo bulshadu ku diirsatay noqotay qaabkii ay ku waajaheen, hawlgalkii cuslaa ee xayiraada qaadka ee ay soo rogtay gudida ka hortaga xanuunka Covid19, taasi oo indhaha caalamka tustay awooda iyo kartida muga leh ee ay leeyihiin Ciidanka Booliska JSL. Sidoo kale waxa iyaduna dhacdo taariikhiya noqotay, qaabkii ay Ciidanka Booliska JSL, uga hawlgaleen, amarkii cuslaa ee xayiraada dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha iyo isku imaatinka bulshada ee goobaha lagu tukado salaada ciida iyo goobaha kale ee bulshada tirada badani iskugu yimaadaan maalmaha farxada ciida, ee ay soo rogtay gudida ka hortaga xanuunka Covid19.